muqdisho – Page 13
DAAWO FADEEXO: Immisa magaalo oo laga xusin 18-ka May,Tooshkii Barnaamijka Baadi Goob & fashilka Muuse Biixi
May 19, 2019 muqdisho 3
Maalintii shalay ahayd oo taariikhda ku beegneyd 18-ka May 2019-ka waxaa deegaano badan oo Somaliland ka tirsan laga xusay maalinta gooni isku taaga Somaliland. Somaliland oo aan wali aqoosan loona arko iney tahay maamul hoostaga
DEG DEG+DAAWO: Daawo:Dhalinyaro Cali khaliif Galaydh Ay Isku Beel Ahaayen Oo Ka Laabtay Taageeradii SNM
Waxaa magaalada Sweden warbaahinta kula hadlay dhalinyaro urur ah oo Ay isku beelyihiin cali khaliif galaydh iyo xildhibaan dhakool. Dhalinyartan oo kamid ahayd kuwii qaabka beelaysan ugu sacabinaayay Fikirkii Madhalayska ahaa ee cali khaliif galaydh
Wararka naga soo gaarayo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa sheegaya in gudaha Degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir lagu rasaaseeyay Gaari ay la socdeen Arday waxka barata mid kamid ah Iskuulada ku yaalla Muqdisho. Falkan
Dhaq-dhaqaaq nuuciisa kii ugu horreeyay muddo ka badan 10 sano ayaa ka curtay magaalada Muqdisho, kaas oo ah in hogaanka dhaqanka ay qaataan go’aano ka dhan ah Dowladda dalka maamusha waxaana xaalad aan looga baran
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed(laftagareen) ayaa ka hadlay qarixii khasaaraha geystay ee ka dhacay degmada Bardaale ee Gobolka Baay ee Maamulka Koonfur Galbeed. Shir Jaraa’id uu ku qabtay Xafiiskiisa ayaa waxaa
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo ku sugan Magalada Jowhar ayaa shalay sheegay in Imtixaanka Ardayda dugsiyada sare oo ay Puntland qaadeyso uu fashilmay,hayeeshee waxaa hadalkaas ka jawaabay Maamulka puntland. Wasiirka waxbarashada
Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni oo ku sugan Degmada Xarfo ee Gobolka Mudug ayaa waxaa uu halkaas kulan muhiim ah xalay kula qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada. Munaasabada oo ay kasoo qayb galeen
May 18, 2019 muqdisho 5
Cabdullaahi Goodax Barre Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya oo ku sugan Magaalada Jowhar ayaa sheegay in imtixaanka maanta ka bilowday degaanada maamulka Puntland uu fashilmay. “Imtixaan waa fashilmaa,saacadaan la joogo Puntland imtixaan ay qaadeysay wuu fashilmay,wadamada deriska
XOG XASAASI AH: Ganacsatada Xamar oo ku biiray qorshe odayaasha ay wadaan oo ka dhan ah DF
May 18, 2019 muqdisho 0
Waxaa lagu wadaa in magaalada Muqdisho ay kulan-kii ugu horreeyay ku yeeshaan odayaasha dhaqanka iyo Ganacsatada Soomaaliyeed ee Gobalka Banaadir, sida ay noo sheegayn qaar kamid ah Ganacsatada. Kulankaan ayaa looga hadli doonaa xaaladda go’doonka
SAWIRRO: Axmed Madoobe Qorshe halis ku ah DF ka dhaadhicinaya Safiirka UK ee Somalia
Madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta Magaalada Kismaayo ee Caasimada KMG ah ee Jubbaland ku qaabilay Safiirka Dowlada Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya Ben Fender. Labada Masuul ayaa ka wada hadlay xaalada Soomaaliya ee
WAR DEG DEG AH: Wasiiro ka careysan Go’aankii Adkaa ee Waare oo goordhow gaaray magaalada Jowhar
Wasiirka Wasaaradda waxbarashadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre iyo Wasiirka Amniga dowladda Soomaaliya Maxamed Abuukar islow Ducaalle ayaa goor dhow gaaray Magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle. Wafdiggaan ayaa garoonka Jowhar waxaa kusoo dhaweeyay Wasiiro ka tirsan
DEG DEG+AKHRISO: Xildhibaanada Golaha Shacabka oo ansixiyay Heshiisyo muhiim ah
Xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa ansixiyey heshiiskii Baydhabo oo guddiga Kheyraadka Golaha maanta ay hor keeneen. Xildhibaanada ayaa sidoo kalena ansixiyey Heshiiska Caalamiga ah ee Dadka Naafada ah kaasi oo Guddiga Arrimaha Dibadda ee Golaha Shacabka
DEG DEG+DAAWO: Burco oo laga diiday Xuska 18-ka May & Madaxda S/land oo Yaaban
May 18, 2019 muqdisho 4
Magaalada Burco oo ahayd halkii ugu xamaasada Badneen Maamulka Somaliland ayaa sanadka waji kale kala Hor timid Maalinta 18 may. Xubno kamid ah maamulka Muuse ayaa sheegay in Burco aan looga diyaar garoobin xuska 18
DAAWO: Muuse Biixi oo Khudbad la ilmeeyay,Eedeyn Culusna ujeediyay Farmaajo & Kheyre
May 18, 2019 muqdisho 8
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi eedeyn u jeediyay dowladda Soomaaliya oo uu sheegay in Muddo 30 Sano ay ku heysay Somaliland dhibaato badan. Muuse Biixi ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay dadaal badan ku bixinayso
DEG DEG+DAAWO: Qaraxyada Muqdisho,Xiisada Farmaajo & Xaaf iyo Go’aankii Muuse Biixi oo lagu farxay
Khilaafka u dhaxeeyo qaar ka mid ah Maamul Goboleedyada dalka iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa cirka isku sii shareeraya gaar ahaan maamulka Galmudug iyo Villa Soomaaliya. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo shaaca ka qaaday sababta ay
DEG DEG+DAAWO: Madaxweyne Dani oo Balanta uga baxay DF,tallaabo lama filaan ahna qaaday
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa goor dhow furay imtixaannada dhexe ee Puntland, kaasi oo ay u fadhiisteen Arday gaareysa 15,800 oo Arday . Madaxweynaha ayaa kula dardaarmay Ardayda in ay ilaaliyaan Sharciga, islamarkaana ay
Kenya iyo Cuba oo Jawaab ka bixiyay dalabkii Al Shabaab ee dhaqaatiirta u afduuban
Warbaahinta dowladda Kenya ayaa shaacisay in dowladda Cuba ay aqbashay bixinta dhaqaalo Madax furasho ah oo lagu sii deynayo labo dhaqtar oo u dhashay dalka Cuba, kuwaasi oo Al Shabaab u afduuban. Dhaqaatiirtaasi ayaa Al
DAAWO: Feysal Cali Waraabe oo shaaciyay Ciqaabta uu mudan yahay Xildhibaan Dhakool
May 18, 2019 muqdisho 2
Guddoomiyaha xisbiga Mucaaradka ah ee UCID Faysal Cali Waare ayaa sheegay in xildhibaan Maxamed Axmed Dhagool oo ku xiran Magaalada Hargeysa uu galay dambi weyn oo ka dhan ah Jiritaanka Somaliland. Waxaa uu sheegay in
DAAWO: Aabe Saddex carruur ah ku waayay Roob ka da’ay Puntland+(Dhacdo Xanuun leh)
Daadad kasoo rogmaday roobab mahiigaan ah oo maalmihii ugu dambeeyay ka da’ayay degmada Waaciye ee maamulka Puntland ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay la tageen 3 wiil oo walaalo ah. Aabaha dhalay Carruurta ayaa